Kuthetha ukuthini ukuphupha ngokuzibulala? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha ngokuzibulala
2 Ukuphupha ngokuzibulala kulungile?
4 Umntu ozibulala
5 Ilinge lokuzibulala
6 Ukuzibulala njengomhlobo
7 Ukuphupha ngokuzibulala kulungile?
Ukuphupha ngokuzibulala luphawu lokuba into iya kufuna ukuba wenze umgudu omkhulu wokuyisombulula. Nangona kubonakala ngathi kubi, kuhlala kulithuba lokufunda kwaye ngenxa yoko iguqukele kumacandelo ahlukeneyo.
Iphupha elifanayo alinakuhlala linentsingiselo emiselweyo kuye wonke umntu. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba kunokubakho iyantlukwano, ke kubalulekile ukuba ukhumbule zonke iinkcukacha. Namhlanje unethuba lokufumanisa ukuba amaphupha okuzibulala angathetha ntoni kwiimeko ezininzi.
Ukuphupha ngokuzibulala kulungile?
Intsingiselo yeli phupha ayisayi kuhlala inxulunyaniswa nento embi, kuba ialam iyakulunga. Ukuphupha ngokuzibulala luphawu olucacileyo lokuba uyakufuna uxinzelelo oluninzi ukoyisa umceli mngeni omkhulu. Phambi kokuba uphume phandle ufuna ukufumanisa ukuba yintoni, zama ukubambelela kwinto okholelwa kuyo.
Olunye unxunguphalo lunokukwenza ube mbi kakhulu, Oko kukuthi, ungathandeki ebomini. Kodwa okwangoku kubalulekile ukuba uhlale uqinisekile ngento oyikholelwayo kwaye uhlale endaweni. Ixesha lakho liyakufika ngaphezulu okanye kancinci, kwaye ungafumanisa ukuba iingxaki zixhaphakile kubomi babantu.
Okwenzekayo ephupheni akuyi kuhlala kuyenzeka ebomini bakho, ke eli phupha libonisa umnqweno wokuphila. Kunjengokuba umntu ekufuneka ehlaziyiwe, oko kukuthi, ukunika izinto ezintsha ithuba. Iingxaki ziya kuqhubeka kuphela ukuba kuya kuba ngcono xa ufunda ukujongana nazo.
Ukungazi kwakho kukukhumbuza ukuba uthando lwakho ngobomi kufuneka luhlale luhlaziywa ngendlela entsha. Abantu banokoyisa kuphela ubunzima xa bekwazi ukucoca ezi ngxaki.
Ingcebiso ebalulekileyo kuwe kukuba ufuna ukukhula kwakho kweyona ndlela ifanelekileyo. Kukuwe kuphela ukuba ufumanise kwaye ngelishwa into endiyisebenzeleyo isenokungasoloko ikulungele.
Olu hlobo lwamaphupha lubonisa ukuba unesidingo sokuziva wamkelekile ngabantu abasondele kuwe. Xa kuvela ingxaki phambi kwakho, kuyinto eqhelekileyo ukufuna abanye abantu bakuncede uyisombulule. Kodwa inyani kukuba unezinye iimeko ekufuneka zisonjululwe nguwe wedwa.
Kuqhelekile ukukholelwa ukuba ukungabikho kokuqonda kuvela kwabanye, kodwa ngamanye amaxesha nguwe ongafuni ukunceda. Ukuphupha ngokuzibulala kubonisa ukuba kufuneka wenze abantu abasondeleyo kuwe bakubone. Zama ukuthetha nokuqonda icala lakho okanye nelabo, kuba lusapho lwakho.
Nangona kubonakala ngathi kubi, uya kubona ukuba olu khetho beluchanekile, nangona ikratshi lakho likwenza ukuba ube nolunye uluvo. Zihlolisise wena nabanye ukuze ubone ukuba bonke bayinxalenye yosapho olunye, Oko kukuthi, baligazi lakho.
Ixesha ledinga elingagqibekanga el mundo ufuna ukutshintsha kwaye phantse lonke olo tshintsho alunakukhawuleza kuba kuthatha ixesha. Xa uziva isidingo sokukhawuleza kubalulekile ukuba uphinde uphinde ungangxami. Uya kubona ukuba olona khetho ulwenzileyo kukuba ulinde kwaye wenze izinto kwiyure apho yonke into inokucingwa ngayo.
Ukuphupha ukuba uzame ukuzibulala sisimemo sokutshintsha. Kulilize ukufuna ukuba yonke into yenziwe ngobusuku obubodwa, kuba ngelishwa ayisiyiyo. Funa uxolo nokuzola ukuze uqonde inkqubo, kuba sonke singabafundi banaphakade ngokunxulumene nobomi.
Uninzi lwabantu luphela lurhoxa kwabanye ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kwaye ukuziva unetyala kuyindalo. Ukuphupha ngokuzibulala luphawu olucacileyo lokuba kuya kufuneka unxibelelane naloo mntu akuncede. Oku kuhamba ngokungakhathali, nangona kunjalo, kwelinye icala kufuneka ube nemfesane ngakumbi kuye.
Mfune ngaphandle kwincoko engqalileyo nethe ngqo, injongo kukusoloko ukuvuselela ubuhlobo kwaye usondele. Ngamanye amaxesha iimeko zikhokelela kumgama phakathi kwezi zimbini, kwaye kwixesha eliphakathi okanye elide kunokuba kubi. Ukuba unakho ukubuyisela ubuhlobo, uya kubona ukuba ukongeza ekuphumeleleni umhlobo, ungenza umohluko.
Iphupha ngalinye nesimemo sokuba ujonge ngaphakathi kwakho kwaye ufumane iimpendulo. Ukuphupha ngokuzibulala luphawu olucacileyo lokuba kufuneka uyeke ukoyisa ubunzima. Ikwaluphawu olomeleleyo lokuba umntu ufuna uncedo lwakho.